यी हुन् विश्वकै विचित्रको मानिस, जसको टाउकोमा छ दुइतिरै अनुहार….. – SUDUR MEDIA
यी हुन् विश्वकै विचित्रको मानिस, जसको टाउकोमा छ दुइतिरै अनुहार…..
May 1, 2021 AdminLeaveaComment on यी हुन् विश्वकै विचित्रको मानिस, जसको टाउकोमा छ दुइतिरै अनुहार…..
एजेन्सी । बेलायतमा एकजना यस्ता अनौठो ब्यक्ति थिए जसको टाउकोमा दुईतिर नै अनुहार थियो । एकतिरको अनुहारमा भएका अंगले सबै काम राम्रोसंग गर्न सक्थ्यो भने अर्कोतिरको अनुहारले मुस्कुराउन मात्र सक्थ्यो । ती व्यक्ति बेलायती नागरिक एडवर्ड मोर्दकै हुन् । जसको टाउकोको मुहार एउटा सुत्दा अर्को उठ्ने गर्दथ्यो ।
उनको जन्मजात नै दुई अनुहार लिएर जन्मिएका थिए । मोर्दकैको पछिल्लो अनुहारले हाँस्ने मात्र गर्छ अरु कुनै प्रतिक्रिया दिने गर्दैनथ्यो । मोर्दकै को दुई अनुहार देखेर मानिसहरु उनी देखि ड’राउँथे । कतिपयले त उनलाई राक्षस समेत भने । शल्यकृया मार्फत उनलाई चिकित्सकले टाउको छुट्याउने सल्लाह पनि नदिएका भने होइनन् ।
तर उनले त्यसो गरेनन् । उनलाई डाक्टरहरुले दिएको सुझाव अनुसार अपरेसन गर्ने चुनौती मोल्न चाहेनन् । अनुहारको कारण उनी निकै चिन्तित थिए । जसका कारण २३ वर्षको उमेरमा नै उनले देह त्याग गरे । उनको नि’धन अल्पआयुमै भएपनि उनलाई देखेकाहरुले भने अझै पनि उनको स्मरण गरिरहन्छन्।
यो पनि हेर्नुहोस्ः यी नवजात शिशु, जो जन्मने बित्तिकै रु’नुको सट्टा रि’साइन्, रातारात भाइरल भयो उनको तस्विर ! बेलायतमा एकजना यस्ता अनौठो ब्यक्ति थिए जसको टाउकोमा दुईतिर नै अनुहार थियो । एकतिरको अनुहारमा भएका अंगले सबै काम राम्रोसंग गर्न सक्थ्यो भने अर्कोतिरको अनुहारले मुस्कुराउन मात्र सक्थ्यो ।
ती व्यक्ति बेलायती नागरिक एडवर्ड मोर्दकै हुन् । जसको टाउकोको मुहार एउटा सुत्दा अर्को उठ्ने गर्दथ्यो । उनको जन्मजात नै दुई अनुहार लिएर जन्मिएका थिए । मोर्दकैको पछिल्लो अनुहारले हाँस्ने मात्र गर्छ अरु कुनै प्रतिक्रिया दिने गर्दैनथ्यो । मोर्दकै को दुई अनुहार देखेर मानिसहरु उनी देखि डराउँथे । कतिपयले त उनलाई राक्षस समेत भने ।
शल्यकृया मार्फत उनलाई चिकित्सकले टाउको छुट्याउने सल्लाह पनि नदिएका भने होइनन् । तर उनले त्यसो गरेनन् । उनलाई डाक्टरहरुले दिएको सुझाव अनुसार अपरेसन गर्ने चुनौती मोल्न चाहेनन् । अनुहारको कारण उनी निकै चिन्तित थिए । जसका कारण २३ वर्षको उमेरमा नै उनले देह त्याग गरे । उनको निधन अल्पआयुमै भएपनि उनलाई देखेकाहरुले भने अझै पनि उनको स्मरण गरिरहन्छन् ।
सधै आफैसँग टिभीमा आउने रोहितको मृ’त्युको खबर आफैले रिपोर्टिङ गर्नु पर्दा आजतकका टिभी जर्नलिस्टहरु लाइभ टेलिकास्टमै ग्वा’ग्वा रो’ए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
रुकुममा भेटिए अचम्मका दाजु बहिनी, यस्तोसम्म गर्न सक्छन हेर्नुहोस दुनियाँ चकित पार्दै ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल बैसाख १० गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अप्रिल २३ तारिख
Breaking: ओली-प्रचण्ड गुटबीच कु’टाकु’ट…
बिजय शाहीले काठमाडौँमा घर पाएपछि पुण्य गौतम ३ छक्क, बिजयलाइ दिए कडा जबाफ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
आफ्नो पूर्वपतिले अर्को विवाह गर्ने खबर सुनेपछि मिना ढकाल आ’गो, मनोजले से’ क्सको लागि विवाह गर्न लागेको आ’रोप ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (3,195)
सुनचाँदीको मूल्य फेरी ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ….. (1,679)
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (1,587)